Lahatsoratra Grika momba ny Blog Action Day ‘09 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2009 6:17 GMT
Ny tanjon'ny Blog Action Day amin'ity taona ity dia ny hanairana ny fahatsiarovan-tena momba ny fiovaovan'ny toetr'andro. Maherin'ny 150 no mpitoraka blaogy Grika nanoratra anarana, ary tena hita soritra ao anatin'ny fandraisan'anjaran'izy ireo ny loza ateraky ny doro ala sy ny fampielezana ny alahelo noho ny tsy fahampian'ny politikan'ny tontolo iainana.
Thirdeye dia niezaka ny hampifandray ny any an-toerana amin'ny iraisam-pirenena amin'ny fampahatsiahivana antsika ny afobe izay nanimba an'i Grèce nandritra ireo taona farany teo:
Aty Grèce, vavolombelona izahay tamin'ireo afo nandritra ireo taona farany teo, izay miteraka voka-dratsy amin'ny ho avy ara-toetr'andron'ny firenena. Tsy sangisangy ho an'ny resa-be ara-politika ny loharanon'angovo hafa fa filàna sosialy, tsy any Grèce ihany fa maneran-tany. [..]Satria aho maniry hoavy mamiratra kokoa, izaho dia manohana sy manasonia ny fanangonan-tsonian'i Hopenhagen ary mandray anjara amin'ny Blog Action Day.
Roides dia niteny fa ny fahamarinana ara-poitika sy ny fitiavan-tanindrazana dia mampidi-doza ny politikan'ny tontolo iainana any Grèce, ary notanisainy ireo tsy fahombiazan'ny politika:
- εξαγγείλαμε στεντορείως και ευρέως το περίφημο: «ότι ήταν δάσος θα παραμείνει δάσος» [..]
Izany no nahatonga antsika nitazam-potsiny olona 67 ho faty, ala sy saha 3 tapitrisa hektara ho kila forehitra, ary namaly ara-politika tamin'ny fametrahana fitsipika goavana toy ny:
fanafoanana ny departemanta misahana ny ala
tsy fandraketana anaty rejistra ny ala
fanambarana eny rehetra eny sy amin'ny fomba haingana fa “hijanona ho ala foana izay efa ala” [..]
Rodia dia naneso ny amin'ny fivakisana ara-tontolo iainana:
Ny tontolo iainana sy ny fiarovana azy, raha lazaina tsotsotra, dia nofy poak'aty, làlan-diso, raha lazaina amin'ny fomba mihaja. Tsy afaka manana orinasa maro rantsana manao ny danin'ny kibony amin'ireo seha-pamokarany ianao, ny setroka sy ny fako simika, tsy afaka hahazo firenena vaventy tsy hanasonia fifanarahana fototra ho fiarovana ny tontolo iainana ( i USA ohatra tsy nanao sonia ny fifanarahan'i Kyoto), ka hangataka aminay olona bitika hitandrina ny bozaka!
… nefa tonga hatrany amin'ny fanolorana ala-olana anatiny:
Afaka manao zavatra kely isika, amin'ny sehatra misy antsika, raha izay no ilazàna azy. Mifantina sy manodina indray ireo fako vokarintsika. Mitandro ireo tora-pasika mba hadio. Miahy ireo valan-javaboaharintsika – ireo hany sisa tavela – mba hitazonana azy ireny tsy havadik'ireo Ben'ny tanàna adalam-bola ho toerana fiantsonan'ny fiarakodia. Mitoroka ireo mpitantana orinasa mandoto ny tahirin-drano fisotro, satria izy ireny afaka mandefa ny zanany hiaina any Soisa na any Bahamas, fa isika kosa hijanona eto foana ary mila rano azo sotroina. Amin'ny fampiasàna ny fitateram-bahoaka sy fanaovana fanentanana amin'ireo toerana tsara fidy ary ny làlana be mpampiasa
Naverin'i Argos navoaka ny video nandraisany anjara tamin'ny Blog Action Day ‘07 ary nomarihany tamim-pahakiviana,
Roa taona lasa izay dia nandray anjara tamin'ny blog action day voalohany indrindra aho, izay ny fiovaovan'ny toetr'andro no lohahevitra. Roa taona aty aoriana, mitovy amin'izay indray ny anton-dresaka. Mazava ho azy fa dia mitovy ihany ny fandraisako anjara.
Tsy nisy vahaolana tao anatin'ny roa taona lasa, noho izany dia tsy hanova na inona na inona aho.